Izibalo zokuthengisa nge-imeyile kufuneka wazi | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 22, 2014 Douglas Karr
Andiqinisekanga ukuba yonke intengiso ye-imeyile enye apha iyimfuneko kwintengiso yakho ye-imeyile, kodwa ezimbalwa zazo ziyandichaphazela:
Ingeniso yeNtengiso ye-imeyile ngokumangalisayo iphantsi kwaye ayikasetyenziswa kude. Ndihlala ndimangalisiwe kwibhlog yethu ukuba intengiso ye-header ihlala ithengisa… kodwa akukho mntu uthengileyo Intengiso kwincwadana yethu yemihla ngemihla neyeveki efikelela ngaphezulu kwababhalisi abangama-75,000 veki nganye.
Ukwamkelwa kwe-imeyile ikwincopho, nge-95% yabathengi abajonga i-imeyile yabo kube kanye ngemini! Ukuba awuthumeli miyalezo ngexesha elifanelekileyo yokufumana, ukugcina kunye neendlela zokuphakamisa amathemba akho kunye nabathengi… uyaphoswa!
Ukusetyenziswa kwe-imeyile eshukumayo ikwenyuka! I-64% yabenzi bezigqibo bafunda ii-imeyile ngezixhobo eziphathwayo. Ngaba ii-imeyile zakho ziyaphendula kwizixhobo eziphathwayo kwaye kulula ukuzifunda? Ndisothukile zingaphi iimveliso eziphambili ezindithumelela ii-imeyile endingenakuzifunda kwifowuni yam ephathekayo. Amaxesha amaninzi ndixakekile kangangokuba ndiye ndicime endaweni yokulinda de ndibuyele kwidesktop ukuze ndifunde.
Mhlawumbi eyona metric ibaluleke kakhulu kuyo yonke into kukuba kuyo yonke i- $ 1 echithwe kwizicwangciso zokuthengisa nge-imeyile, $ 44.25 yimbuyekezo ephakathi kutyalo-mali lokuthengisa nge-imeyile. Yimbuyekezo kutyalo-mali olungenakoyiswa ngamanye amajelo okuthengisa kunye nezicwangciso.
Infographic ngu I-Visualistan.
tags: Uyilo lwe-imeyileemail Marketingizibalo zokuthengisa nge-imeyileukufundwa kwe-imeyileIzibalo ze-imeyileimeyile ephathekayomobile imeyile ephendulayoimeyile ephendulayo
Indawo yokugcina: Ukubalisa amaBali kwi-iPad